I-Best Free VPN ye-Mac (2020) - Kulula ukuyisetha nokuyisebenzisa - I-Vpn
Noma kunjalo, ukuthola ukuthi yimaphi ama-VPN wamahhala we-Mac?Silapha ukuzosiza.
Ama-VPN amathuluzi amahle wokugcina idatha yakho iphephile kulo mhlaba oku-inthanethi. Kumele ucabange ukuthi kungani ngidinga i-VPN ukuze ingigcine ngiphephile uma sengivele ngine-antivirus efakwe kwi-Mac yami. Into ukuthi, ama-VPNs engeza isendlalelo esingeziwe sokuphepha lapho upheqa ku-inthanethi. Futhi ama-VPN awenzi lokho kuphela, kodwa futhi akuvumela ukuthi ufinyelele kokuqukethwe okuvinjiwe nokuhlolwe kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba futhi kukusize uvimbe izikhangiso ezingadingekile kanye nezigelekeqe.
Namuhla, sizokunikeza ukukhetha kwethu okuphezulu kwama-VPN wamahhala we-Mac yakho. Ake singene kuwo.
Kungani Sisebenzisa ama-VPN wamahhala?
Into enama-VPN wamahhala ukuthi yize uthola ukufinyelela kwamahhala kule nsizakalo, kunqunyelwe futhi hhayi kuze kube kumaki wezinhlelo ze-premium. Kepha sikholelwa ukuthi ukuba nokuthile kungcono kunokungabi nalutho. Ngakho-ke, siqinisekisile ukuthi uthola ama-VPN wamahhala amahle kakhulu laphaya we-Mac yakho.
Ufuna Izinsizakalo Ze-VPN Eziphephile? Hlola Izinsizakalo ezi-10 ezihamba phambili ze-VPN kusuka esigabeni sethu sebhulogi.
Uhlu lwama-VPN wamahhala we-Mac:
1. Express VPN - No # 1 VPN ongayithola
Le yi- # 1 VPN ongayitholela i-Mac yakho mahhala. Yize udinga ukwenza inkokhelo ngaphambi kokufinyelela insizakalo yabo kukhona okubanjiwe, njengoba banikela nge- Inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali yezinsuku ezingama-30 , ungakhetha ukuphuma kokubhalisile kungakapheli izinsuku ezingama-30 bese uthola imali yakho ephelele. Itholakala ngeBig Sur (11), Catalina (10.15), Mojave (10.14) & High Sierra (10.13), X Yosemite (10.10) & X El Capitan (10.11).
Kanye ne-OS, Isebenza kuwo wonke amamodeli we-Macbook ne-iMac laphaya. Ungayisetha ngezinyathelo ezintathu ezilula futhi ujabulele i-inthanethi kusiphequluli sakho se-safari ngokuphepha okwengeziwe.
Njengoba ukhokhela insizakalo ngaphambili, uthola zonke izici zivuliwe ngaphandle kwemikhawulo.
Uthola amaseva avela ezindaweni eziyi-160 emhlabeni wonke ahlanganisa amazwe angama-94.
Amaseva enzelwe ijubane elikhulu.
Split tunneling feature evumela ukuthi wena ukhethe ukuthi yikuphi okuqukethwe okuzokwenzelwa ummeleli futhi okuzoxhunywa ekuxhumekeni okujwayelekile.
Isici Sokubulala Inethiwekhi esiqinisekisa ukuthi ithrafikhi yakho ivinjiwe uma inethiwekhi yommeleli ingasebenzi.
Xhuma kuze kufike kumadivayisi we-5 ngasikhathi.
Uma ufisa ukuthenga izinsizakalo zabo ze-premium ngemuva kwesivivinyo samahhala. Nazi izinhlelo abanikezayo
Uhlelo lwenyanga eyodwa: Izikweletu ze- $ 12.95 (₹ 955.44).
Uhlelo lwezinyanga eziyisithupha:Ikhokha u- $ 9.99 (₹ 737.10) ngenyanga & $ 59.95 (₹ 4423.44) izinyanga eziyisithupha sezizonke.
Uhlelo lwezinyanga eziyishumi nanhlanu: Ikhokha u- $ 6.67 (₹ 492.23) ngenyanga & $ 99.95 (₹ 7375.36) isikhathi esiyizinyanga eziyishumi nanhlanu.
Zonke lezi zinhlelo zinesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30.
2.NordVPN - Konke Okuhamba phambili Kwe-Mac
Lo mhlinzeki wenethiwekhi ye-proxy wasePanama ungenye yezinto ezinhle kakhulu ongazitholela i-Mac yakho mahhala. Futhi banesikimu se- Ukubuyiselwa imali kwezinsuku ezingama-30 ukuze ukwazi ukufinyelela kuzo zonke izici zabo ze-premium ngaphandle kwemikhawulo yezinsuku ezingama-30 futhi ukhethe ukuphuma ekubhaliseni ngaphambi komaki wenyanga eyodwa.
INordVPN iyi-VPN engcono kakhulu ye-MacOS, isikhombimsebenzisi sayo sihlanzekile futhi kulula kune-ExpressVPN. Baze banikeze amaseva afihlekile, lawa maseva awalutho ngaphandle kwamaseva ahlukile angasetshenziswa ngokukhethekile ukufinyelela ku-VPN lapho imikhawulo yokusetshenziswa kwensizakalo inzima. Ungashintsha futhi phakathi kwezivumelwano ezifana ne-TCP / UDP ngokuya ngokuthanda kwakho ngejubane nokwethembeka.
Ngokukhokha ngaphambi kwesikhathi, umsebenzisi angavula zonke izici umsebenzisi we-premium angazithola. Ake sibheke ezinye zazo.
ungakhetha kusuka kumaseva angaphezu kwama-5400 atholakala emazweni angaba ngu-59.
Indlela yokubethela ye-Inhouse NordLynx egcina idatha yakho iphephe kakhulu.
Amaseva amaningi we-P2P ayikhulu akuvumela ukuthi wabelane ngamafayela amakhulu ngosayizi kalula futhi ngokuphepha.
Awukho umkhawulo we-Bandwidth, ungajabulela i-inthanethi yakho esheshayo ngaphandle kokuphazamiseka.
Xhuma kuze kufike kumadivayisi ayi-6 ngasikhathi.
Ungahlola uhlu oluphelele lwezici ze-MacOS NordVPN lapha
INordVPN inikeza izinhlelo ezintathu uma ufisa ukuthenga insizakalo yabo ye-premium.
3.I-Hotspot Shield VPN - Ithenjiwe nge-Speed ​​Reliability
Uhlobo lwesivivinyo samahhala seHotspot shield, ngokungafani neNordVPN ne-ExpressVPN, lingazanywa mahhala; awudingi ukukhokha ngaphambi kwesikhathi. Kepha ukushiyeka kwalokhu ukuthi uthola izici ezinomkhawulo. Kukhona nokubanjwayo nakulena, futhi banikela ngesikimu sokuqinisekisa ukubuyiselwa imali kwezinsuku ezingama-45, uma ufisa ukuthola zonke izici ze-premium ngaphandle kokulinganiselwa, ungathenga olunye lwezinhlelo zabo ze-premium bese uphuma kuzo ngaphambi kwezinsuku ezingama-45 uphawu.
IHotspot Shield ithi iyinsizakalo esheshayo ye-VPN yoMhlaba. Siphambukile sahlola lesi simangalo futhi yilokhu esikutholile: Ngobuchwepheshe be-Hotspot Shield's catapult hydra, ikwazile ukuthola ukwanda okungu-26.2% ngejubane labo lokulanda ngenkathi amanye ama-VPN ewa okungenani ngo-42.5%. Lokho kuyashesha impela!
Sibala uhlu lwenguqulo yamahhala ngokuphelele ngezansi.
Ijubane le-inthanethi elifinyelela kuma-500 Mbs nsuku zonke.
Ungasebenzisa iseva esekwe e-USA ngejubane elinokwethenjelwa
Ukubethela kwebanga lezempi kuvimbela izingosi ezingaphezulu kwezigidi ezingama-50 ze-malware nobugebengu bokweba imininingwane ebucayi usuku ngalunye.
Iphrothokholi yobunikazi enelungelo lobunikazi egama linguHydra, eqinisekiswa ngochwepheshe abahamba phambili njengokushesha futhi okuphephe kakhulu.
Uma ucabanga ukuthi udinga ukuthola i-premium version yeHotspot Shield, nazi izinhlelo ongakhetha kuzo.
Uhlelo lwe-Premium:Uma uthenga iphakethe laminyaka yonke lolu hlelo, uluthola ngo- $ 71.88. Uma uthenga inyanga eyodwa kuphela, khona-ke uyithola nge $ 12.99.
Uhlelo Lokuqala Lomndeni:Uma uthenga iphakethe laminyaka yonke lolu hlelo, uluthola ngo- $ 143.88. Uma uthenga inyanga eyodwa kuphela, kuzokubiza u- $ 19.99.
Zombili lezi zinhlelo ziza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-45.
4. Fihla.Mi - 10GB Inyanga ngayinye
I-Hide.me VPN ikunikeza insiza yama-Gigabyte ayi-10 inyanga ngayinye ngohlelo lwayo lwamahhala lapho ungakhetha khona iseva ezindaweni ezinjenge-USA, Canada, Netherlands, neSingapore. Azikho izingodo ezigcinwa ngenguqulo yamahhala, futhi uhlelo lokusebenza alunazo izikhangiso ezifana nezinguqulo ezithile zamahhala.
Umkhawulo wedatha eyi-10 GB ungukuhamba okukhulu ngempela, kungcono kakhulu kunikezwa noma iyiphi inguqulo yesivivinyo samahhala. Kuyinto esenze safaka iHide.me kulolu hlu. Akugcini lapho, ngohlobo lwamahhala, uthola ukubethelwa okuphezulu kwezinga lezempi kanye nesici sokuvuza se-IP okuphinde kube ukuhlinzekwa okukhulu ngenguqulo yamahhala.
I-Hide.me kufanele ikunikeze ezinye zezici ezinhle ngenkathi usebenzisa mahhala, ake sibheke ezinye zezikhiye
Uthola ama-GB angu-10 womkhawulo wokusetshenziswa inyanga ngayinye. Okuwanele ukusakaza okunye okuqukethwe kwencazelo ephezulu nokulanda izifufula.
Ungakhetha amaseva ezindaweni ezi-5 ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. (I-USA, Netherlands, Canada, Singapore)
Ukubethela kwebanga lezempi kuthrafikhi yakho. I.e. Ukubethela kwe-AES-256. Kuphephe kakhulu.
Iphinde inikeze ukuvikelwa kokuvuza kwe-IP.
Isici sokuhlukanisa ukuhlukaniswa, okubaluleke kakhulu ngenkathi kwenziwa imisebenzi eminingi.
Uma kukhulunywa ngokuthengwa kwe-premium, uHide.me unikela ngezinhlelo ezintathu.
Uhlelo lwenyanga eyodwa:ikhokhiswe ku- $ 12.95
Uhlelo lwezinyanga eziyisithupha: ikhokhiswa ngo- $ 4.99 ngenyanga (ukonga okungu-62%)
Uhlelo Lonyaka One:ikhokhiswa ngo- $ 3.32 inyanga ngayinye (ukonga okungu-74%)
Zonke lezi zinhlelo ziza nenqubomgomo yokubuyiselwa imali yezinsuku ezingama-30.
5. I-Tunnelbear VPN - Ilungele ukuqala
Uma umusha kusimo se-VPN, le yi-VPN yakho. Isebenziseka kalula futhi yenza umsebenzi oyinhloko. Ngama-500mbs wedatha inyanga ngayinye, akuyona into engcono kakhulu ukuyisebenzisela imisebenzi emikhulu, kepha yenza imisebenzi emincane kahle futhi kalula. Akudingeki ukuthi ube yi-geek ukuze usebenzise izici zayo.
I-Tunnelbear isobala ngokuphepha kwabo kangangokuba bashicilela ngokoqobo ukuhlolwa kwabo kwezokuphepha okwenziwa ngokuzimela. Ungahlola okufanayo lapha .Uzodinga ukumisa mathupha iTunnelbear noma kunjalo ngoba izilungiselela mathupha kuphela ku-Linux.
Ezinye izici ezibalulekile ozozithola nenguqulo yamahhala ye-tunnelbear yilezi.
Ama-500 MBs wokusetshenziswa kwedatha inyanga ngayinye.
inkululeko yokukhetha amaseva avela emazweni angama-23. (UK, USA, Canada, Germany, Japan njll)
Ukubethela okuncane kwe-AES-256 kuphephe kakhulu.
Amaseva womhlaba wonke alungiselelwe (kepha afika kuma-500MB kuphela)
Bulala isici sokushintsha ukuze uvikele idatha yakho uma insizakalo ye-VPN yehla.
I-Tunnelbear inikeza izinhlelo ezimbili ze-premium up-gradation.
Uhlelo olungenamkhawulo:okukhokha u- $ 3.33 ngenyanga.
Uhlelo lwamaqembu:okukhokha u- $ 5.75 ngenyanga.
ITunnelbear ayinikeli ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
1Q. Ingabe kufanele ngisebenzise i-VPN ku-Mac yami?
Iminyaka:Kufanele usebenzise i-VPN nakanjani. Kungani? Ngoba ingeza isendlalelo esingeziwe ekuvikelekeni kwakho futhi ikusiza ukuthi uhlale uphephile endaweni eku-inthanethi. Kufanele uqiniseke ukuthi i-VPN oyisebenzisayo inhle futhi ilandwe kuwebhusayithi esemthethweni. Uma ufuna i-VPN eshibhile noma enamamodeli, khona-ke ingalimaza kakhulu kunokulungela ubumfihlo bakho.
2Q. Ingabe i-Apple incoma i-VPN?
Iminyaka:Yize i-Apple inekhasi elizinikele kuwebhusayithi yayo ye-VPNs, ayimakethi futhi ayimisi abasebenzisi bayo ekusebenziseni i-VPN. Ungafunda ngakho lapha .
3Q. Ngingalandelelwa uma ngisebenzisa i-VPN?
Iminyaka:Cha, awukwazi ukulandelwa uma usuxhunywe ku-VPN, ikheli lakho le-IP lifihliwe isevisi, futhi uma noma ubani ezama ukukulandela, uzobona ikheli le-IP le-VPN hhayi elakho.
4Q. Kuphephile ukusebenzisa i-VPN lapho wenza ukubhenka ku-inthanethi?
Iminyaka:Yebo, kuphephile ukusebenzisa insiza ye-VPN ngenkathi wenza ukubhenka online, ikunikeza ungqimba olungeziwe lokuvikelwa futhi ikugcina uphephile ekuntshontshweni kwe-cyber. I-VPN enhle ngeke igcine ngisho izingodo zakho zedatha, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngemininingwane yakho eyigugu eyebiwe futhi ithengiswe.
Ama-VPN ayithuluzi elikhulu onalo lokuphepha nobumfihlo. Ama-VPN amaningi wamahhala alungile ephepheni futhi empeleni awasebenzi njengoba efuna uma kukhulunywa ngokusetshenziswa okusebenzayo, kepha lawa ma-VPN esiwabalulile ekukhetheni kwethu athembekile ngokuphelele futhi ayiqiniso. Yize ungeke uthole zonke izici ngezinguqulo zamahhala ezinye zazo, kepha noma iyiphi insizakalo enomkhawulo abazoyinikeza, kuzoba semthethweni.
Khetha ukuthi yikuphi okusebenzela wena futhi uphephe futhi uvikeleke ku-inthanethi.
I-Orehura Isizini 2: Konke Odinga Ukukwazi Ngayo!!
I-FIFA 22 - Zonke Izinto Ezintsha Esihlokweni Zibuyekeza 8!